Fifanakalozana asidra mahery ...
Fifanakalozana asidra malemy r ...
Fifanakalozana base anion matanjaka ...
HANALA NY ARSENIKA AVY AMIN'NY SISTEMAN'NY RANO MAHAY
Ny Arsenic dia singa misy poizina misy fari-dalàna isan-karazany. Ny MCL mahazatra (haavon'ny fifantohana betsaka indrindra) ho an'ny arsenika amin'ny rano fisotro ho an'i Etazonia dia 10 ppb.
MA-202U (Resin-takelaka fifanakalozana Anion mahery)
MA-202U dia manana fahaiza-manao avo, mahatohitra tohotra, macroporous, Type I, resin ny fifanakalozana anion tena ilaina amin'ny endrika klôroza toy ny volo mando, henjana, fanamiana, boribory. Ny resina dia ampiasaina amin'ny fitrandrahana uranium amin'ny teknolojia famolavolana vahaolana ao an-toerana.
Uranium dia singa radioaktifa malemy nanjary malemy. Ny uranium avo lenta ao anaty rano dia mety hampitombo ny mety ho voan'ny homamiadana sy ny voa. Ny ankamaroan'ny uranium izay mihinana amin'ny sakafo na zava-pisotro amin'ny vatan'olombelona dia avoaka, fa ny sasany kosa dia moka ao anaty lalan-dra sy voa.
MALEMY Base Anion (WBA) résins dia polymer vita amin'ny polymerizing styrene na asidra acrylic sy divinylbenzene ary chlorination,amination. Orinasa Dongli afaka manome gel sy macroporous karazana WBA resina amin'ny tsipika mikambana. Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=18870879 ''
Resina fifanakalozana anion tena malemy: ity karazana resina ity dia misy vondrona fototra malemy, toy ny vondrona amino voalohany (fantatra koa amin'ny hoe vondrona amino voalohany) - NH2, vondrona amino faharoa (vondrona amino faharoa) - NHR, na vondrona amino tertiary (vondrona amino tertiary ) - NR2. Izy ireo dia afaka misaraka Oh - anaty rano ary malemy fototra. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny resin dia manaparitaka ireo molekiola asidra hafa rehetra ao amin'ilay vahaolana. Tsy miasa afa-tsy amin'ny tsy miandany na amin'ny asidra (toy ny pH 1-9). Azo averina averina amin'ny Na2CO3 sy NH4OH izy io.
Ireo karazana resin-tsolika maro an'i Dongli dia misy vondrona miasa manokana izay manome ireo safidiny ireo ho voafantina tsara kokoa ho an'ny metaly kendrena manokana. Ny resa-pitenenana Chelies dia hita amina rindrambaiko fanalana sy fanarenana metaly marobe, avy amin'ny fanarenana voalohany ny metaly sarobidy ary koa ny fanesorana ireo loto izay mety ho toy ny soritra fotsiny.
Ny resins mahery Base Anion (SBA) dia polymer vita amin'ny polymerizing styrene na acrylic acrylic sy divinylbenzene ary chlorination, amena.
Ny orinasa Dongli dia afaka manome karazana gel sy macroporous resa SBA miaraka amin'ny rohy hafa. Ny SBA dia misy amina sokajy marobe ao anatin'izany ny endrika OH, ny haben'ny fanamiana ary ny ambaratonga sakafo.
Ny resins an'ny Weak Acid Cation (WAC) dia copolymerized amin'ny acrylonitrile sy divinylbenzene ary hydrolyzing azy amin'ny asidra sulfuric na Sodium hydroxide.
Ny orinasa Dongli dia afaka manome resins WAC macroporous miaraka amina crosslink sy grady isan-karazany, ao anatin'izany ny endrika Na, haben'ny poti-panamiana ary ny naotin'ny sakafo.
Ny resins Acid Cation (SAC) mahery dia polymer vita amin'ny polymerizing styrene sy divinylbenzene ary sulfonating misy asidra sulfuric. Ny orinasa Dongli dia afaka manome karazana gel sy macroporous resin'ny SAC miaraka amin'ny rohy hafa. Ny SAC misy antsika amin'ny gradings marobe, ao anatin'izany ny endrika H, ​​ny haben'ny fanamiana ary ny ambaratonga sakafo.
Dongli vonona hampiasa resins fandriana mifangaro dia voaomana manokana fangaro resina avo lenta natao ho an'ny fanadiovana rano. Ny tahan'ny resins dia ampiorina hametrahana fahaiza-manao ambony. Ny fahombiazan'ny vonona hampiasa resin fandriana mifangaro dia miankina amin'ny fampiharana. Betsaka ny resin am-pandriana mifangaro no misy miaraka amin'ireo tondro izay manamora ny fiasan'ny asa raha tiana ny hanehoana fahitana tsotra ny havizanana.
Vakana volo inert sy Polymer
Ny resin'i Dongli's Inert / Spacer dia ampiasaina hamoronana sakana amin'ny fandriana fifanakalozana ion ary hitazomana ny vakana fifanakalozana ion amin'ny toerana tokony hisy azy ireo. Izy ireo dia afaka miambina ireo mpanangona ambany, ireo mpaninjara ambony ary mamorona fisarahana eo anelanelan'ny cation sy ny anion ao anaty fandriana mifangaro. Ny resina inert / Spacer dia misy habe sy fikirakira samihafa mba handrakofana ireo rafitra fikirakirana maro karazana.